တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA(26W)နှင့်လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း(27W) | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
November 25, 2009 — mmweather
ယနေ့နံနက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၉ နာရီ ၄၃ မိနစ် (03:13 UTC) တွင် ရရှိသည့် ဂြိုလ်တုမြေပုံတွင် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA ၏ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 27W တို့၏ အခြေအနေအား အောက်ပါအတိုင်းတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
View update sat-picture from WUND
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: 27W, NIDA, tropical-depression, tropical-storm, typhoon, weather. LeaveaComment »
« အပူပိုင်းမုန်တိုင်း NIDA အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာ
CAT-5 အဆင့်အထိရောက်လာတဲ့ စူပါတိုင်ဖွန်း NIDA »